ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး ကလက်ဘ် ပိုင်ရှင် ရာရှန်း ဘီလီယံနာ အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဖြစ်လာ | Great Arakan
Home News ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး ကလက်ဘ် ပိုင်ရှင် ရာရှန်း ဘီလီယံနာ အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဖြစ်လာ
FILE PHOTO. Roman Abramovich. © Global Look Press
ညဇာက ကဗာကျော် ဘောလုံးအသင်း၊ ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး ကလက်ဘ် (Chelsea Football Club) ပိုင်ရှင် ရာရှားလူမျိုး ရိုမန် အဘ်ရာမိုဗဲ့ရှ် (Roman Abramovich) ကို အစ္စရေးနိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပါရေ။ ဗြီးခရေ ရက်ပိုင်းအတွင်း၊ ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး ကလက်ဘ် ရှိရေ ယူကေ (UK) မှာ၊ ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးစွာ လိုစွာထက် အချိန် ပိုကြာနိန်လို့၊ ယူကေကနိန် တိုင်းပြည်အပြင်ကို ထွက်လားရပါရေ။ လက်ရှိ ယူကေ အစိုးရက ရာရှားသဌေးတိကို ပိုပနာ စစ်ဆေးမှုတိ လုပ်နိန်ပါရေ။
အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ ပြဌာန်းထားရေ၊ အစ္စရေးကို ပြန်လာရေး ဥပဒေ (Israel’s Law of Return) အရ တကဗာလုံးမှာ ရှိရေ ဂျူးလူမျိုးတိုင်း အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါရေ။ အေဥပဒေအရ အဘ်ရာမိုဗဲ့ရှ် က အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဖြစ်လာစွာပါ။
လောလောဆယ် အဘ်ရာမိုဗဲ့ရှ် စွာ အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၁.၄ ဘီလီယံ ချမ်းသာပနာ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာပါရေ။
အစ္စရေးနိုင်ငံသားတိစွာ ယူကေမှာ ဗီဇာ လျှောက်စရာ မလိုဘဲ၊ တကြိမ်လာကေ ၆ လထိ နိန်ထိုင်ခွင့်ရှိပါရေ။
Previous articleယူကေ မှာ တညဉ့်တည်း လျှပ်စီး အကြိမ် ၂ သောင်း လက်
Next articleဆမာ့တ် ဆီးလုံး သောက်ပနာ ဝမ်းထဲက အခြေအနေတိကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်နိုင်ဖို့ဗျာလ်